UmNcedisi weNgcaciso - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat. Umsasazo osemthethweni we-NAB Bonisa, uMvelisi we-NAB Bonisa LIVE
ikhaya » imisebenzi » UmNcedisi uMhleli
UYobhi Ukuvula: uMncedisi uMhleli
Imisebenzi ebalulekileyo YoJob:
* Umbutho wezakhiwo zolawulo, izicwangciso zokuqamba amagama, njl njl
* Ukufometha, ukucwangcisa & ukuguqula umxholo wokusetyenziswa kwe-offline.
* Ukuloba nayiphi na inkcazelo efanelekileyo kwiCFP.
* Ukudala kunye nentlangano yeeprojekthi ezingekho phantsi kwamanye amazwe kubahleli.
* Yenza imisebenzi yolawulo, kubandakanywa: ukugcina ikhalenda yokuhlela kunye namanye amaxwebhu okulandelela; ukudala amaspredishithi kunye neentetho, nokuqhagamshelana namanye amasebe.
* Nceda abavelisi ukuhlaziya izilungiso zeenguqulelo ezintsha.
Imigangatho yokuQinisekisa okuHlangeneyo:
Iminyaka eyi-2 + yoLwazi oluPhezulu loLuntu olukhethiweyo
* Ulwazi olunzulu lweNkulumbuso kunye QAPHELA
* Ukuqonda kolwazi oluphakathi lweComment Cut Pro 7
* Ukuqonda kwendawo yokugcinwa kwenethiwekhi yendawo ekwabelwana ngayo (ISIS / Unity / XSAN)
* Ukuqonda HD/ Iifom ze-SD, iifayili kunye nokuthengiswa kwetape okusekelwe
* Ukuqonda isilinganiselo samazinga, ukuguqulwa, kunye neeCodec
* Amandla okuthetha ngempumelelo nabanye
* Ikhono lokubaluleka, ukuguqula imisebenzi emininzi, ukuthatha isalathiso, kwaye unike isikhokelo
Ulwazi / izakhono:
* Kumele ube nolwazi oluthe ngqo.
* Kufuneka ihambe ngokukhawuleza ngokukwazi ukuphendula nokubeka phambili ngokukhawuleza
* Izakhono eziphambili kunye nezakhono zonxibelelwano, kubandakanye ukubhala, ukuthetha, nokuphulaphula.
* Kufuneka akwazi ukuthetha kumanqanaba athile, afanelekileyo kubaphulaphuli.
* Ubuchule obuninzi bokukhanda. Kufuneka sikwazi ukulawula iiprojekthi ezininzi ngexesha elinye.
* Umviwa kufuneka abe yingxaki yokukhetha ingxaki.
* Ukuzikhuthaza kunye nokuqhutywa.
* Inqanaba, lizolile kwaye lisebenza kakuhle phantsi kwengcinezelo.
* Ukulungelelanisa ngokufanelekileyo ngokugxotha phambili izinto eziphambili ezikhuphisanayo kunye nokutshintsha okulindelekileyo.
Iingxelo: Ulawulo unelungelo lokufaka okanye ukutshintsha imisebenzi kunye neemfuno zomsebenzi kunini na. Ukongezelela, umqeshi unokuqwalasela ukuba umntu owenza isicelo okanye obambe isikhundla uyafaneleka. Kukho amanyathelo amabini abandakanyekayo kulo mqathango. Inkxalabo yokuqala ukuba ngaba umfaki sicelo okanye umqeshwa wangoku uyanelisa iimfuno ezifunekayo zesikhundla. Isinyathelo sesibini sichaza ukuba okanye umntu akakwazi ukwenza imisebenzi ebalulekileyo yomsebenzi okanye ngaphandle kweendawo zokuhlala ezifanelekileyo.
Emva kwemiphumo UmNcedisi uMhleli Injineli yokusasaza Sasazo Photoshop Mveliso Ukuveliswa kweVidiyo	2017-09-13
Previous: Umncedisi Ikhamera
next: PA / Umqhubi
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "uMncedisi uMhleli". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/assistant-editor-54/. Enkosi.